Sida loo abaabulo mudaharaad | Somaliska
Socdaalka / Somaliska
Mudaharaadka waa nidaam nabadeed oo lagu gaaro ujeedkaaga, wadamo ayaa ku xoroobey ayagoon xabad ridin, hadaba sidaas si la mid ah mudaharaadku wuxuu muhiim u yahay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Sweden kuwaasoo loo diiday in caruurtooda loo keeno, way jiraan iskudayo badan oo wadanka ka dhacay ayadoo ay ugu dambeysay sabtidii la soo dhaafay oo magaalada Göteborg ay isugu soo bexeen 40 qof oo Soomaali. Hadaba halkaan waxaan isku dayayaa in aan wax ka qoro sida loo abaabulo mudaharaad waxtar leh. 1. Ujeedada: qeybtaan waa in ay kuu cadey inta aadan bilaabin qorsheynta isku soo baxa, sida iska cad ujeedada mudaharaadka Soomaalidu waxa uu noqonayaa in laga mudaharaado diidmada Sweden balse waa in ay ka war hayaan dhamaan ka soo qeyb galayaasha ...waa dhibaato haddii qof uu u maleeyo in meesha looga banaan baxayo xaalada Soomaaliya ama in lacagta la kordhiyo. Marka qodobka koowaad waa cadeynta ujeedada. Faafinta: Qeybta xigta waa faafinta dhacdada si ay dadka uga war helaan, wac cid alaala iyo cidii ka soo qeyb gali karta, ku faahi internetka iyo saxaafada. La xiriir saxaafada si ay ugu soo qeyb galaan maalinta isku soo baxa. Haddii aysan saxaafadu ka war helin isku soo baxa cid ogaaneysa maleh hadaba ahmiyad gaar ah sii sidaad saxaafada goobta u keeni laheyd. 2. Qorsheynta: Ka dib markii la isku afgarto ujeedada, waxaa loo gudbayaa qorsheynta waa qodobka ugu muhiimsan oo hadduusan si wanaagsan u dhicin laga yaabo in ay dhibaato dhacdo. Hadaba waxaa muhiim ah in marka la qorsheynayo mudaharaadka madaxa lagu hayo qodobadaan kale. -Maalinta: waxaa muhiim ah in aad ka fikirto maalin ay dadka badankoodu ka soo qeyb gali karaan. Isku day in aad ka fokaato maalmaha ay dadka howlo gale ku mashquul sanyihiin. -Goobta: Waa muhiim in aad doorato goob ku haboon ujeedka mudaharaadka, tusaale ahaan haddii mudaharaadka ku saabsanyahay diidmaha Sweden waxaa haboon agagaarka Laanta Socdaalka balse ku tasho in ay goobta qaado dadka ka soo qeyb galaya, sidoo kale wargali booliska goobtaas si aysan ugu wareerin waxa meesha ka socda. -Adeegayaasha: soo aruuri koox ka mid ah dadka oo ka qeyb qaadata agaasimka iyo isku duba ridka mudaharaadka. -Calaamadaha: Kuwaan aad ayay muhiim u yihiin, qeylo iyo buuq looma baahna, ujeedka dhan waxaa lagu soo gudbin karaa calaamaha iyo boorarka ay dadku qaataan oo ay ku qoran yihiin waxyaabaha aad ka dhiidhineysaan iyo waxyaabaha aad dooneysaan. Marka soo samee calaamadaha kala duwan oo midabyo soo jiidasho leh. Haku soo sawirin sawiro aan indhaha u fiicneyn. -Way fiicantahay haddii aad heli karto in ay goobta ka halaan dadka bulshada maqaam ku leh, haddii taas qorshaha ku jirto ha soo iloobin sameecadaha. -Ku baraaruji nadaafada: waxaa muhiim ah in ka soo qeyb galayaasha aysan wasaqeyn goobta la isugu imaanayo, sidaa darteed waa in aad ku baraarujisaa nadaafada ka dib mudaharaadkana waa in aad ku tashataa in aad nadiifiso goobta. -La hadal saxaafada oo u sharax ujeedka isku soo baxa adigoo qiiro muujinaya. - Ugu dambeynta iska ilaali in adiga iyo dadka ka soo qeyb galaya aysan jabin wax sharci ah oo ka soo horjeeda sharciga u yaal dalka. Isku soo baxa: Markii aad waxkasta soo qorsheysay oo maalintii isku soo baxa ay tahay, u diyaar garoow in aad isku soo baxa ka dhigto mid nabad ah wax alaale iyo wixii qalalaase ah ka fogaada, boolisku waa in ay goobta joogaan. Haddii waxyar oo xumaan ah ay goobta ka dhacdo ogaado ujeedkiinii waa fashilmay oo qasaare ayaad meesha ka soo dhaxasheen. Wa bilaahi Towfiiq. Jimcale
Sida loo abaabulo mudaharaad
Mudaharaadka waa nidaam nabadeed oo lagu gaaro ujeedkaaga, wadamo ayaa ku xoroobey ayagoon xabad ridin, hadaba sidaas si la mid ah mudaharaadku wuxuu muhiim u yahay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Sweden kuwaasoo loo diiday in caruurtooda loo keeno, way jiraan iskudayo badan oo wadanka ka dhacay ayadoo ay ugu dambeysay sabtidii la soo dhaafay oo magaalada Göteborg ay isugu soo bexeen 40 qof oo Soomaali.
Hadaba halkaan waxaan isku dayayaa in aan wax ka qoro sida loo abaabulo mudaharaad waxtar leh.
1. Ujeedada: qeybtaan waa in ay kuu cadey inta aadan bilaabin qorsheynta isku soo baxa, sida iska cad ujeedada mudaharaadka Soomaalidu waxa uu noqonayaa in laga mudaharaado diidmada Sweden balse waa in ay ka war hayaan dhamaan ka soo qeyb galayaasha …waa dhibaato haddii qof uu u maleeyo in meesha looga banaan baxayo xaalada Soomaaliya ama in lacagta la kordhiyo. Marka qodobka koowaad waa cadeynta ujeedada.
Faafinta: Qeybta xigta waa faafinta dhacdada si ay dadka uga war helaan, wac cid alaala iyo cidii ka soo qeyb gali karta, ku faahi internetka iyo saxaafada. La xiriir saxaafada si ay ugu soo qeyb galaan maalinta isku soo baxa. Haddii aysan saxaafadu ka war helin isku soo baxa cid ogaaneysa maleh hadaba ahmiyad gaar ah sii sidaad saxaafada goobta u keeni laheyd.
2. Qorsheynta: Ka dib markii la isku afgarto ujeedada, waxaa loo gudbayaa qorsheynta waa qodobka ugu muhiimsan oo hadduusan si wanaagsan u dhicin laga yaabo in ay dhibaato dhacdo. Hadaba waxaa muhiim ah in marka la qorsheynayo mudaharaadka madaxa lagu hayo qodobadaan kale.
-Maalinta: waxaa muhiim ah in aad ka fikirto maalin ay dadka badankoodu ka soo qeyb gali karaan. Isku day in aad ka fokaato maalmaha ay dadka howlo gale ku mashquul sanyihiin.
-Goobta: Waa muhiim in aad doorato goob ku haboon ujeedka mudaharaadka, tusaale ahaan haddii mudaharaadka ku saabsanyahay diidmaha Sweden waxaa haboon agagaarka Laanta Socdaalka balse ku tasho in ay goobta qaado dadka ka soo qeyb galaya, sidoo kale wargali booliska goobtaas si aysan ugu wareerin waxa meesha ka socda.
-Adeegayaasha: soo aruuri koox ka mid ah dadka oo ka qeyb qaadata agaasimka iyo isku duba ridka mudaharaadka.
-Calaamadaha: Kuwaan aad ayay muhiim u yihiin, qeylo iyo buuq looma baahna, ujeedka dhan waxaa lagu soo gudbin karaa calaamaha iyo boorarka ay dadku qaataan oo ay ku qoran yihiin waxyaabaha aad ka dhiidhineysaan iyo waxyaabaha aad dooneysaan. Marka soo samee calaamadaha kala duwan oo midabyo soo jiidasho leh. Haku soo sawirin sawiro aan indhaha u fiicneyn.
-Way fiicantahay haddii aad heli karto in ay goobta ka halaan dadka bulshada maqaam ku leh, haddii taas qorshaha ku jirto ha soo iloobin sameecadaha.
-Ku baraaruji nadaafada: waxaa muhiim ah in ka soo qeyb galayaasha aysan wasaqeyn goobta la isugu imaanayo, sidaa darteed waa in aad ku baraarujisaa nadaafada ka dib mudaharaadkana waa in aad ku tashataa in aad nadiifiso goobta.
-La hadal saxaafada oo u sharax ujeedka isku soo baxa adigoo qiiro muujinaya.
– Ugu dambeynta iska ilaali in adiga iyo dadka ka soo qeyb galaya aysan jabin wax sharci ah oo ka soo horjeeda sharciga u yaal dalka.
Isku soo baxa: Markii aad waxkasta soo qorsheysay oo maalintii isku soo baxa ay tahay, u diyaar garoow in aad isku soo baxa ka dhigto mid nabad ah wax alaale iyo wixii qalalaase ah ka fogaada, boolisku waa in ay goobta joogaan. Haddii waxyar oo xumaan ah ay goobta ka dhacdo ogaado ujeedkiinii waa fashilmay oo qasaare ayaad meesha ka soo dhaxasheen.
Sweden oo joojisay ku celinta Giriiga (cusub)
Shaqaale ka tirsan Laanta Socdaalka oo xabsi lagu xukumay
Wasiirkii arrimaha dibadda Noorweey muxuu kala hadlay dowladda Soomaaliya?
sxb jamcale Asc aad ayaad umahadsan tahay ilahay haku dhowro
Runtii qoraalkaani waa mid doowo oo kale aan udareemay waana wax loobahan yahay in lagu dhaqmo
waad asiibtay umana baahna wax in lagu daro ilahay dadkeena wanaaga hatuso waadna mahadsantahay walaahi somaliska waa guriga somalida sweden thanks bro
December 21, 2010 at 20:16
AC dhamaan umadda Somaliyed oo degen Sverige iyo ute intaas kadib sxb waaye adoon cid wax u geeysan ayaad gaari kartaa u jeedadaada. jimcale sxb arinti ehed xaga fomka loo qeeybinaayay Kamuunanka sveirge isku day inaaad u dirto wabsayada qaar si dadku aw u arkaaan waliba wabsedyada aad lii aqristo Wb